Umaka: ukusebenza kokuqukethwe | Martech Zone
Maka: ukusebenza kokuqukethwe
Wooing abathengi abaningi nokunciphisa imfucuza ngokuqukethwe okuhlakaniphile
NgoLwesibili, Septhemba 13, 2016 NgoLwesibili, Septhemba 13, 2016 UJenn Lisak Golding
Ukusebenza kokumaketha kokuqukethwe kubhalwe kahle, kuveza ukuhola okungaphezulu kwama-300% ngezindleko eziphansi ezingama-62% kunokumaketha kwendabuko, kubika iDemandMetric. Akumangalisi ukuthi abathengisi abasezingeni eliphakeme baye basusa amadola abo baya kokuqukethwe, ngendlela enkulu. Isithiyo, nokho, ukuthi i-chunk enhle yalokho okuqukethwe (i-65%, empeleni) kunzima ukuyithola, ikhulelwe kabi noma ingathandeki kulabo ababhekiswe kubo. Leyo yinkinga enkulu. "Ungaba nokuqukethwe okuhle kakhulu emhlabeni," kwabelwane ngakho
Ocwaningweni olusha oluthunyelwe yi-Kapost oluvela e-Aberdeen Group, ucwaningo luthole abathengisi abambalwa abazizwa bekhiqiza ngokwanele futhi belandelela okuqukethwe kwabo. Futhi kuvela igebe elisebenzisekayo phakathi kwabaholi bokuqukethwe nabalandeli bokuqukethwe. I-Kapost ibiza isikhathi soguquko lapho ukufunwa kuphezulu kepha ukuhlela okuhle kushoda ngama-Chaos wokuqukethwe. Baklame i-infographic engezansi ukubeka izithiyo ezibalulekile (nezinzuzo) ekusunguleni isu lokusebenza kahle lokuqukethwe. Nakho konke
IBlitzMetrics inikeza ideshibhodi yomphakathi eqapha idatha yakho kuzo zonke iziteshi zakho nemikhiqizo endaweni eyodwa. Akunasidingo sokucinga amamethrikhi kuwo wonke amapulatifomu ahlukahlukene wezenhlalo. Uhlelo luhlinzeka ngokubika kubalandeli bakho abaphezulu nabalandeli ukukusiza ukwakha ukwazisa ngomkhiqizo, ukuzibandakanya futhi ekugcineni - ukuguqulwa. Ngaphezu kwakho konke, iBlitzMetrics isiza abathengisi ukuthi baqonde ukuthi yikuphi nokuqukethwe okuphumelela kakhulu ukuze ukwazi ukulungisa imiyalezo yakho ngokuya
Ukuziphatha Ukuziphatha Kushintshile, Izinkampani Azikashintshi
NgoMgqibelo, Januwari 23, 2010 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kwesinye isikhathi senza izinto ngoba nje yindlela okwenziwe ngayo. Akekho okhumbulayo ukuthi kungani ngempela, kodwa siyaqhubeka sikwenza… noma ngabe kusizwisa ubuhlungu. Lapho ngibheka ukuthengiswa okujwayelekile nokulandelana kwezinkampani zezinkampani zesimanje, isakhiwo asikashintshi selokhu saba nabantu abathengisayo abadudula umgwaqo futhi bedayela amadola. Ezinkampanini eziningi engizivakashele, “ukuthengisa” okuningi kuyenzeka ohlangothini lokumaketha lodonga. Ukuthengisa kumane nje kuthathe